အပင်ပေါက်ရန်အတွက်ဘရောင်းဆန်ကမ္ဘာ့ Feed ရနိုင်မလား? - စာမျက်နှာ 2
1 အများဆုံးအထွက်နှုန်းယူအက်စ်အေ - ဇူလိုင်လ 2010
1.1 ဘရောင်းဆန် Hunger တစ်ခုဖြေ germinated သလဲ? Peggy Bradley တို့က
1.1.3 GBR ဆန်သည်ကြီးထွားလာပရိုတိုကော
1.1.7 GBR အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်ခုနှစ်တွင် germinated ပြီးတော့ချက်ပြုတ်
အများဆုံးအထွက်နှုန်းယူအက်စ်အေ - ဇူလိုင်လ 2010
ဘရောင်းဆန် Hunger တစ်ခုဖြေ germinated သလဲ? Peggy Bradley တို့က
ဆန်အများအပြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်အရေးအပါဆုံးအစားအစာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ခန့်များအတွက်အဓိကအစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ဦးစီးဌာန (USDA) အကြောင်းကို 2007 တန်ချိန်သန်းဖြစ် 2008 မှ 432 အတွက်ကမ္ဘာ့ဆန်သီးနှံထုတ်လုပ်မှုခန့်မှန်းထားသည်။ 2005 အတွက်ရိတ်သိမ်းဆန်အတွက်အသုံးပြုဧရိယာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 387 သန်းဧကဖြစ်ခဲ့သည်။ သုတေသနယခုယခုအခါအစားအစာတော်လှန်ရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် hydroponicallygrown germinated အညိုရောင်ဆန်, ၏တန်ဖိုးအပေါ်သုတေသနပြုဖြစ်သကဲ့သို့တိရစ္ဆာန်များအဘို့မြက် hydroponically ပြုစုပျိုးထောင်အပေါ်ကောက်ယူလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ 1989s အတွက် Derek Cuddeford "Hydroponic မြက်" (1980) ၏စာရေးဆရာနှင့်အခြားသူများအားဖြင့်ရှေ့ဆောင်အလုပ်အညှောက်ပေါက်နှင့်အသစ် germinated အစေ့မြုံမျိုးစပါးထက်ပိုမိုမြင့်မားအစားအစာတန်ဖိုးထားတဲ့နားလည်မှုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာမွေးမြူရေးနှင့်လူသားများအတွက် germinated အစားအသောက်သို့ထို့နောက်နောက်ထပ်သုတေသနစားစရာဘို့ကြီးထွားဖို့ hydroponics ၏နိဒါန်းမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာ 2004 ခုနှစ်တွင်, ဂျပန်ကနေစက္ကူကမ္ဘာကိုအသစ်တခုအပင်ပေါက်ရန်အတွက်ဘရောင်းဆန် (GBR) လို့ခေါ်တဲ့အစားအသောက်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဂါဘမြို့သားဆန် (Shoichi & Yukihiro, 2004) ကြေညာခဲ့သည်။
ဘရောင်းဆန်ဘရောင်းဆန်ဆန်ဖြူထက်အာဟာရအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဘရောင်းဆန်ဖယ်ရှားစပါးကိုသာပြင်အလွှာရှိပါတယ်။ White ကဆန်, မရှိတော့မယ့်အလားအလာမျိုးစေ့, ဗီတာမင်, သတ္တုဓာတ်, အမျှင်ဓာတ်နှင့်မရှိမဖြစ်ဖက်တီးအက်ဆစ်များဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့ချွတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်ကုန်ရာခိုင်နှုန်းအကြောင်းကို 10 ၏ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဆန်ဖြူရလဒ်များကိုမှအညိုရောင်ဆန် milling ၏လုပ်ငန်းစဉ်။ လူဦးရေအစားအဖြူအညိုဆန်စားသုံးစတင်ပါက, မရရှိနိုင်ထုတ်လုပ်မှုကနေဖယ်ရှား 38.7 သန်းဧကသို့မဟုတ်အစားအစာ 43 သန်းအပိုတန်ချိန်အဲဒီမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တကမ္ဘာလုံးကြောင့် 850 သန်းဆာလောင်မွတ်သိပ်လူတွေရှိပါတယ်ခန့်မှန်းထားသည်။ ဒီစုစုပေါင်းအနည်းဆုံး 550 သန်းအာရှ၌ရှိကြ၏။ အာရှသားဆန်တစ်နှစ်လျှင် 300 ပေါင်အကြောင်းကိုပျမ်းမျှစားသုံးကြသည်။ အညိုရောင်ဆန်ဖို့ switch ကိုကနေရရှိနိုင်တဲ့အပိုဆန်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုဖြေရှင်းရေးအတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဘရောင်းဆန်အညိုရောင်ဆန်ထောက်ခံသည့်ကျန်းမာသောအဟာရဖြစ်အစားအစာ, အတူ 70s အချို့လူကြိုက်များရရှိခဲ့သည်။ အကြီးပြဿနာများကိုအညိုရောင်ဆန်အများကြီးလျော့နည်းသွား ယူ. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရောင်းချခဲ့အများဆုံးဆန်နေတုန်းပဲအဖြူခဲ့ကြောင်းခဲ့ကြသည်။
ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်လွဲအရသာတစ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်အနည်းငယ်ဆန်ဖြူရလဒ်များကိုခဲ့ဖို့ပိုရှည်အညိုရောင်ဆန် milling ၏လုပ်ငန်းစဉ်။ ထုတ်ကုန်ရာခိုင်နှုန်း 10 ပတ်သက်. လူကြိုက်များ။
ဂျပန်ကနေအသစ်အညိုရောင်ဆန်အမှန်တကယ်ချက်ပြုတ်မီ Pre-germinated လျက်ရှိသည်ဆိုအညိုရောင်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆန်ပေါက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဖို့နာရီ 100 မှရှစ်ဘို့အကြောင်းကို 24 F ၏အပူချိန်မှာထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါအာဟာရအကျိုးခံစားခွင့်သို့အများစုမှာလေ့လာမှုများလည်းအပင်ပေါက်ရန်အတွက်ဘရောင်းဆန် (GBR) အဖြစ်လူသိများသည် kernel ကိုကနေပဲ (အရပ်ရှည်ရှည်မီလီမီတာ 0.5 မှ 1.0) ဖူးအငုံထွက်၏အနည်းငယ် bit နဲ့ပြသနိုင်ဖို့စတင်ကြောင်းဆန်ဖြင့်လုပ်သောနေကြသည်။
GBR ဆန်အပြောင်းအလဲနဲ့မှတဆင့်ပျော့ပျောင်းခဲ့ပြီးယခုအခါလျော့နည်းအချိန်အတွက်ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစတွေဟာအစာကြေဖို့လွယ်ကူသည်နှင့်တစ်ဦးအံ့သြစရာဆိမျ့အရသာရှိပါတယ်။ ဂျပန်မှာတော့ကကျယ်ပြန့်အယူခံဝင်ရှိပြီးတကမ္ဘာလုံး GBR စျေးကွက်မှစတင်ကာအနည်းငယ်ကုမ္ပဏီများနှင့်စျေးကွက်ထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်။
GBR အပေါ်တချို့ကသုတေသနယခုကျွန်တော်တို့ကိုအစာအာဟာရ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိပေးဖို့ခြေလှမ်းကိုနားလည်ကူညီရန်တည်ရှိ။ အဆိုပါဖူးအငုံထွက်မယ့်ပြသရန်စတင်သည်သည့်အခါအမြင့်ဆုံးအမိုင်နိုအက်ဆစ်အစားအစာတန်ဖိုးများကိုရရှိခဲ့ကြသည်။ ကြာကြာဆန် Germinating အစားအစာရဲ့တန်ဖိုးကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ (5.5 ထံမှ 9.0 မှ) ကွဲပြားခြားနားသော pH တန်ဖိုးစမ်းသပ်အခါအာဟာရအစားအသောက်တန်ဖိုးများအတွက်နည်းနည်းခြားနားချက်ရှိ၏။ အပူချိန်ကအရေးကြီးတယ်, အေးသောအပူချိန်ပိုရှည်ကြိမ်လိုအပ်သို့မဟုတ်မှာအားလုံးအပင်ပေါက်ရန်အတွက်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ တိုတောင်းသောဘောဇဉ်အညိုရောင်ဆန်ဂါဘမြို့သားများ၏အမြင့်ဆုံးတိုးမြှင့်ရှိသည်ဖို့ပုံရသည်။
Saikusa, Horino နှင့် Mori (1994) အညိုရောင်ဆန် 104 နာရီရှစ်နာရီ 24 F ကိုရေထဲမှာစိမ်သောအခါ Gamma-Amirobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) သိသိသာသာတိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အဆိုပါအင်ဇိုင်းအချိုမှု decarboxylase Gamma-aminobutyric အက်ဆစ်သို့အချိုမှုအက်ဆစ်ပြန်သွားလေ၏။ အပင်ပေါက်ရန်အတွက်အဖြစ်ပွတ်ဆန်ချက်ပြုတ်စားရန်ပြုလုပ်သကဲ့သို့လွယ်ကူစေသည်ဖြစ်သောဆန်၏အပြင်ဘက်၌အလွှာ softens ။
100g / အညိုရောင်ဆန်စွမ်းအင် 345Kcal ပရိုတိန်း 7.3g စုစုပေါင်းအဆီ 2.9g Saturation အဆီ 0.58g လက်စထရော 0mg ဘိုဟိုက်ဒရိတ် 77g အစားအသောက်ဖိုင်ဘာ 2.8g ဆိုဒီယမ် (Na) ကယ်လ်ဆီယမ် (Ca) 2.1mg သံ (Fe) 8.1mg မဂ္ဂနီစီယမ် (Mg) 1.1mg သွပ် (Zn) 74mg 2.1mg germinated ခြောက်သွေ့သောအလေးချိန်နှုန်း ဂါဘမြို့သား 16.5mg ဗီတာမင် B1 0.3mg ဗီတာမင် E ကို 1.7mg Inositol 452mg ရင်းမြစ်: ။ AsiaRICE ဇီဝသိပ္ပံ, Inc အဖြူရောင်ဆန် 363Kcal 7.0g 0.9g 78g 0.4g 4mg 5mg 0.3mg 22mg 1.4mg 1.5mg 0.08mg 0.4mg 96mg
"အပင်ပေါက်ရန်အတွက်ဘရောင်းဆန်ပိုပြီးဖိုင်ဘာ, lysine ၏သုံးကြိမ်ပမာဏတစ်ခုမရှိမဖြစ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့် 10 ကြိမ်ဂါဘမြို့သား၏ပမာဏရှိပါတယ်။ "
အဆိုပါအပင်ပေါက်ရန်အတွက်ဖြစ်စဉ်ကိုအင်ဇိုင်းတွေမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆန်အချို့သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်, အထူးသဖြင့် Gamma-Aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) ၏အဆင့်မြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ GBR ပိုပြီးဖိုင်ဘာ, lysine ၏သုံးကြိမ်ပမာဏတစ်ခုမရှိမဖြစ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့် 10 ကြိမ်ဂါဘမြို့သား၏ပမာဏရှိပါတယ်။
Okada et al ။ (2000) ထိုသို့သောအိပ်စက်မှုလျော့ကျ, somnipathy နှင့်စိတ်ကျရောဂါအဖြစ်သွေးဆုံးခြင်းနှင့် presenile ကာလအတွင်းအသုံးအများဆုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများတိုးတက်ရှစ်ပတ်ဂါဘမြို့သားများစားသုံးမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ Jeon et al ။ (2003) GBR အသည်းပျက်စီးမှုကိုနှိပ်ကွပ်ဘို့ထိရောက်သောဖြစ်မည်အကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
GBR ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်ပြုမိခံနေရတာသုတေသနလက်ရှိရှိပါသည်။ ဒါဟာ GBR အစာစားခြင်းသွေးဖိအားကိုလျှော့ချနိုင်ပုံနိမ့်လက်စထရော, ကျောက်ကပ် function ကို restore, ပြုပြင်အသည်း, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျှော့ချရန်နှင့်ကင်ဆာတားဆီးနိုငျသညျ။
"GBR အပေါ်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အစားအစာ၌ဤရိုးရှင်းသောပြောင်းလဲမှုနာတာရှည်နာမကျန်းမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီစေခြင်းငှါပြသထားတယ်။ "
အညိုရောင်ဆန် germinated အခါကြီးထွားမှုအတွက်အစာအာဟာရထောက်ပံ့သောဆန်အတွင်းကြီးစိုးအင်ဇိုင်းတွေ activated နေကြသည်။ ဒါဟာနောက်ထပ်အင်ဇိုင်းတွေမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်စာဖိုင်ဘာပမာဏဖြစ်ပါတယ်ကဲ့သို့သော L-lysine (ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအားလုံးပရိုတိန်းများအတွက်လိုအပ်သောအဆောက်အဦပိတ်ပင်တားဆီးမှု) နှင့် -aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) .Vitamins နှင့် antioxidants အဖြစ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်, တိုးမြှင့်နေကြသည်တိုးပွားစေပါသည်။ ကို un-germinated ဆန်များတွင်မတွေ့ရှိနယူးအာဟာရအစိတ်အပိုင်းများကိုကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက်သက်ရောက်မှုတွေနှင့်အစောပိုင်းစိတ်ဖောက်ပြန်၏ကုသမှုနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားသည့်အပင်ပေါက်ရန်အတွက်အထူးသဖြင့် protylendopetidase inhibitor, စဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့နေကြသည်။
GBR အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်ခုနှစ်တွင် germinated ပြီးတော့ချက်ပြုတ်
အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်ထဲမှာအပင်ပေါက်ရန်အတွက်နှင့်ချက်ပြုတ် GBR ဆန် ပို. ပင်၎င်း၏အာဟာရအရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်သောအင်တာနက်ပေါ်ရှိဆွေးနွေးမှုရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိဤပြောဆိုချက်ကိုအပြစ်လွတ်စေခြင်းမရှိအမှန်တကယ်စမ်းသပ်ချက်သို့မဟုတ်ဒေတာဖြစ်ရှိပုံပေါ်ပါတယ်။ သို့သော်အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိခိုက်စေဖို့ပေါ်လာပါဘူးနှင့်အရသာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေနိုင်သည်။